Malls သည် Datacenters ဖြစ်လာသည့်အခါ ... | Martech Zone
တနင်္ဂနွေ, ဇွန် 29, 2008 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
မနေ့ကမှာကြီးစွာသောနေ့ကဖြစ်ခဲ့သည် အဆိုပါ Bean ကိုဖလား။ Patric ကနေဖြင့်ရပ်တန့် မင်္ဂလာပါထံမှ Doug Theis Lifeline ဒေတာများ နောင်ကာလ၌အာဒံသည်ဆင်းသက်၏ တောင်းဆိုမှုအားဖြင့်စာသား.
Lifeline Datacenters တွင် Eastgate Mall ၏အသစ်စက်စက်တွင်တကယ့်ကိုအေးမြ။ မထင်မှတ်သောအရာများရှိသည်။ Indianapolis Business Journal သည်သူတို့ ၀ ယ်ယူပြီးသည့်အခါသူတို့အတွက်ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ဖော်ပြခဲ့သည်။ ယခုအခါစက်ရုံသည်အသက်ဝင်လာပြီဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ခေါင်းလောင်းများနှင့်ဆူညံသံတိုင်းနှင့်ပြည့်စုံသော datacenter တစ်ခုဖြစ်သည်၊ ငါ Indianapolis တွင်တစ်ခုတည်းသော Tier IV နှင့်အနောက်အလယ်ပိုင်းတွင်အကြီးဆုံးဖြစ်သည်။
Eastgate Mall ကို ၅၀ ပြည့်လွန်နှစ်များတွင်တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး၊ အဲဒါက ... ဖြစ်တယ် တရားဝင်အနှစ် 50 အပြီးတွင်သေပြီ ဝန်ဆောင်မှု၏။ USC နှင့်အတူ Nuke တည်ဆောက်မှုအမြင့်တွင်တည်ဆောက်ခဲ့သောအချို့ကုန်တိုက်ကြီးများတွင်ထိုအချိန်ကဖက်ဒရယ်အခွန်ခရက်ဒစ်များဖြင့်တည်ဆောက်ထားသောမြေအောက်ဘန်ကာများရှိသည်။ ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာမင်းမှာစတုရန်းကီလိုမီတာတန်ချိန်၊ အသွားအလာသွားနိုင်မှု၊ စွမ်းအင်စီးဆင်းမှုအမြောက်အများ၊ မီးစက်၊ အအေး၊
သင်တန်းတွင်၎င်းတွင်ဒေတာစင်တာတစ်ခုတည်ဆောက်ပါ။ ဤစီမံကိန်းအတွက်မည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ၊ သို့သော်၎င်းသည်တောက်ပ။ အံ့သြစရာကောင်းသည်။ ယခုအခါလက်လီရောင်းဝယ်မှုအမြောက်အများသည်အွန်လိုင်းသို့ပြောင်းရွှေ့သွားပြီဖြစ်ရာကုန်တိုက်တစ်ခုသည်ဒေတာစင်တာတစ်ခုသို့ပြောင်းလဲခြင်းသည်မည်မျှအေးခဲသနည်း။ ဒါဟာငါ့ရဲ့စာအုပ်ထဲမှာနောက်ဆုံးအမြစ်တွယ်နေတယ်။ Eastgate သည်လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကခြေလျင်အသွားအလာအတွက်၎င်း၏တံခါးများကိုပိတ်ထားခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်တိုင်းပြည်အတွင်းရှိရောင်းအားအကောင်းဆုံး၊ ကုန်တိုက်ကြီးများထဲမှရှင်ပြန်ထမြောက်ရန်အခွင့်အလမ်းရှိသည်!
ငါလာမယ့်အပတ်မှာဒါမှမဟုတ်ဒီဂရီ Doug နှင့်အတူခရီးစဉ်ရရန်အချိန် setup ကိုကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။ ငါသူတို့ပြီးမြောက်သောအရာကိုကြည့်ဖို့မစောင့်နိုင်ပါ!
Tags: Eastgate ကုန်တိုက်lifeline ဒေတာစင်တာများ
သင့်ရဲ့ Blog ကိုကြီးထွားရန်အကောင်းဆုံးနည်းဗျူဟာ
ဇွန်လ 29 ရက် 2008 ခုနှစ် နံနက်6နာရီ 50 မိနစ်
ကုန်တိုက်တစ်ခု၏ ကံကြမ္မာသည် ဒေတာစင်တာတစ်ခုအဖြစ် လူဝင်စားခြင်းဖြစ်သည်... အဓိပ္ပါယ်ရှိသည်။ ဒါကို "e-budism" လို့ ခေါ်နိုင်သလား။
ဇွန်လ 29 ရက် 2008 ခုနှစ် နံနက် 8 နာရီ 39 မိနစ်
Bean Cup ကို ကြိုက်ပြီး Doug နဲ့ စကားပြောရတာ ကြိုက်တယ်။ အဲဒါကို မကြာခဏလုပ်ဖို့လိုတယ်။ Doug ၏ ဒေတာစင်တာအသစ်ကို သင်သွားရောက်လည်ပတ်သည့်အခါတွင် ကျွန်ုပ်ကို ထည့်သွင်းရေတွက်ပါ။
ဇွန်လ 29 ရက် 2008 ခုနှစ် နံနက် 10 နာရီ 50 မိနစ်
e-budism ကို သဘောတူပါတယ်။
အဲဒါက ကုန်တိုက်အတွက် အရမ်းမိုက်တယ်။ Doug ဟာ ဒီလိုမျိုး ကြုံလာရမှန်း မသိဘူး။ အရမ်းမိုက်တယ်။
ဇွန် 29, 2008 မှာ 5: 14 pm တွင်
Doug အသိအမှတ်ပြုမှုအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မနေ့က မင်းနဲ့ Patric နဲ့ Bean Cup ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ စကားပြောရတာ အရမ်းပျော်တယ်။ လူကြီးမင်းတို့ အတွက် စီစဉ်ထားသော Eastgate ခရီးစဉ်ကို ကျွန်ုပ်တို့ ရရှိပါမည်။